499s Dem Party ၏ဥက္က2020္ဌမှ“ ဥပဒေသစ်ကိုမပြောင်းလဲနိုင်ဘူး” ဟုပြောပြီးနောက် ၂၀၂၀ စည်းမျဉ်းများအလယ်ပိုင်းကိုပြောင်းလဲ images and subtitles
>>> ကြိုဆိုပါ၏နောက်သို့။ >>> ကြိုဆိုပါ၏နောက်သို့။ ကွဲပြားခြားနားဖို့, ငါတို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအထူးအစီရင်ခံစာတစ်စုံတစ်ခုအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအထူးအစီရင်ခံစာ ဤသူသည်အဆုံးစွန်ဒီမိုကရက်တစ်ဆန်ခါတင်ဖြစ်သူပုံသဏ္ULာန်နိုင်ပါတယ် TRUMP ဆန့်ကျင်ပြေးဖို့နောက်ဆုံးဒီမိုကရက်တစ်ဆန်ခါတင်။ Trump ကျော်ပြေး။ လူတွေဘယ်လောက်ရှိခဲ့ပြီလဲ ဒီလူတွေဘယ်လောက်အထိဒီဒီမိုကရက်တစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုပြေးကြတာလဲ ဒီ DEMOCRATIC PRESIDENTIAL NOMINATION FOR RUNNING? ဥက္ကN္ဌအမည်စာရင်း? ၂၈ နှစ်ခန့်၊ အကယ်၍ မင်းအားလုံးကိုသူတို့ရေတွက်လျှင် ၂၈ နှစ်ခန့်၊ အကယ်၍ မင်းအားလုံးကိုသူတို့ရေတွက်လျှင်။ UP ။ အိုင်တီကဲ့သို့ခံစားရခံစားရ ပြိုင်ဘက်အရေအတွက်နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးပေါ့။ ပြိုင်ဘက်နည်းသည် သောမီ, သောကြောင့် ပထမ ဦး ဆုံးမဲပေးနေစတင်ခဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သော ပထမ ဦး ဆုံးဆန္ဒမဲစတင်ခြင်းစတင်ခဲ့ပြီးမဲဆန္ဒရှင်များမကြာခဏအစစ်အမှန်ကြည့်ရှုပါ အတိတ်, မဲဆန္ဒရှင်များမကြာခဏသူတို့ကဲ့သို့အစစ်အမှန်ပြိုင်ဘက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုကြည့်ပါ ပြိုင်ဘက်ပြိုင်ပွဲဝင်သူများသည်ပြိုင်ပွဲအဆင့်ကိုတက်ရောက်သူများဖြစ်သည်။ အဘယ်သူသည်ဆွေးနွေးငြင်းခုံအဆင့်။ သောအရေးကြီးသောစေသည်။ သောအရေးကြီးသောစေသည်။ အကယ်၍ သင်သည်နောက်ဆုံးခုနစ်ခုမဟုတ်ပါက အကယ်၍ သင်သည်နောက်ဆုံးခုနစ်ခုတွင်ထိပ်ဆုံးခုနစ်ခုမဟုတ်ပါကမည်မျှအလေးအနက်ထားမည်နည်း မဲဆန္ဒရှင်များအနေဖြင့်သင့်အားမည်ကဲ့သို့အလေးအနက်ထားသင့်သနည်း။ မဲဆန္ဒရှင်များကသင့်ကိုယူသင့်ပါသလား။ သောနံပါတ်ဖွစျသညျ သောသောနေ့က ANDREW AND AND ANDREW သောကြာနေ့ကခြောက်ကြိမ်မြောက်ကျရှုံးခဲ့သည် ANDREW YANG နှင့်အတူသောကြာနေ့ခြောက်ရက်မှစ။ ဆင်း။ YANG မှထွက်ကျဆင်းနေသည်။ ခင်ဗျားတို့တော်တော်လေးသိမယ်ဆိုရင်တောင် သငျသညျ Pretty ကောင်းကောင်းသိရင်ဒါမှမဟုတ်အများကြီးရှိသည်လျှင်ပင် သို့မဟုတ်ငွေအမြောက်အများ ရှိ၍၊ အငြင်းပွားမှုအဆင့်သည်ကြီးမားနိုင်သည် အငြင်းပွားမှုအဆင့်အကြီးအကျယ်ကွဲပြားစေနိုင်သည်။ ကွဲပြားမှု။ ဘီလျံနာသူဌေးကြီး Ross ကပြောကြားသည် ဘီလျံနာသူဌေးကြီး Ross ကသူတစ် ဦး ကဖန်ဆင်းတော်မူသည်ထင်ခဲ့ပါဘူး သူကအိုင်တီမစဉ်းစားခဲ့ပါဘူးကွဲပြားခြားနားပေမယ့်အားလုံးလုပ်လေ၏ ကွဲပြားမှုသို့သော်အိုင်တီသူ၏မလုံခြုံရန်အတွက်ကွဲပြားမှုအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ သူ၏မငြိမ်မသက်လှုပ်ရှားမှုအတွက်ကွဲပြားမှု။ ကမ်ပိန်း။ >> သင်ထင်လိမ့်မယ်ထင်သလား >> သင်ကငြင်းခုံမှုများတွင်ပါ ၀ င်လိမ့်မည်ဟုသင်ထင်ပါသလား။ ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများတွင်ပါဝင်သည်? >> ငါဂရုမစိုက်နိုင်ဘူး။ >> ငါဂရုမစိုက်နိုင်ဘူး။ >> သင်ဖြစ်လို။ >> သင်ဖြစ်လို။ >> ငါ OF LOVE လို။ >> ငါ OF LOVE လို။ >> Ross Perotot ဖိတ်ကြားခဲ့သည် >> ROSS PEROT ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်၌ပါဝင်ရန်။ ၌ပါဝင်ရန် >> သင်သည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သင့်သည် >> အကယ်၍ သင်သာ ၅% သာလည်ပတ်နေပါကအဘယ်ကြောင့်သင်အငြင်းပွားမှုတွင်ရှိနေသင့်သနည်း အကယ်၍ သင်ကပင်စုစုပေါင်း၏ ၅% ကိုသာအပြည့်အ ၀ လည်ပတ်နေပါကငြင်းခုံမှုရှိပါသလား စာအုပ်၏? >> ငါတို့အားလုံးကိုတွေ့သောကြောင့် >> ကျွန်ုပ်တို့သည်ငြင်းခုံမှု၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်များကိုတွေ့သောကြောင့် DEBATE ကော်မရှင်၏ရည်ရွယ်ချက်များ။ ကော်မရှင်။ ကျနော်တို့နောက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှု၌ရှိကြ၏ ကျနော်တို့နောက်ဆုံးသောအချိန်၌ရောက်နေတယ်ကျနော်တို့ပါဝင်သည်ခဲ့ကြသည် TIME နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အငြင်းပွားမှုများတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ဆွေးနွေးငြင်းခုံ။ >> SO အဘယ်အရာကိုရည်ရွယ်သည် >> ဒီတော့ဘာရည်ရွယ်ချက်ကို CRITERIA စေသည်? CRITERIA? မူလတန်းမှာတော့ပါတီ မူလတန်းမှာတော့ပါတီဆုံးဖြတ်သည်။ ဆုံးဖြတ်။ ဒါကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောမီဒီယာ OLLETS ဒီတော့ကွဲပြားခြားနားသောမီဒီယာထုတ်လွှင့်အမြစ်တွယ်ထွက်လာနေတုန်း ဤအငြင်းခုံထုတ်လွှင့် ROTATE, ယနေ့ညဖြစ်ပါတယ် ဆွေးနွေးငြင်းခုံ, အိုင်တီယနေ့ညဉ့် DEMOCRATIC ပါတီဖြစ်ပါတယ် သူတို့ထဲ၌ရှိသော WHO အတွက်သတ်မှတ်ထားသည့်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ။ သူတို့တွင်အဘယ်သူသည် CRITERIA ။ ဒီနည်းကိုဖြစ်စေ၊ ချိုးနိုင်သလား။ ဒီနည်းကိုဖြစ်စေ၊ ချိုးနိုင်သလား။ ဒီစက်ဝိုင်း, DNC လုပ်စည်းမျဉ်းများ, ဒီစက်ဝန်း, DNC စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ, လျှောက်ထားတစ် ဦး တွေ့ဆုံရမည် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများတစ် ဦး အပြည့်အဝလှိမ့်ခြစ်သို့မဟုတ်ပုံဆွဲရပါမည် THRESHOLD သို့မဟုတ် DRAW မှကောက်ယူစုဆောင်းထားသောရန်ပုံငွေရှာ လူပေါင်း ၆၅၀၀၀ မှအလှူငွေကောက်ခံခြင်း။ 65,000 လူတွေ။ အခုသူတို့ဘာဖြစ်လို့လှူဒါန်းတာလဲ အခုဒီအလှူငွေများကိုဘာကြောင့်လိုအပ်ရတာလဲ။ အားလုံးလိုအပ်ချက်? DNC သဘာပတိကနောက်ဆုံးနှစ်တွင်ပြောခဲ့သည်။ DNC ဥက္ကCH္ဌလိုအပ်ချက်စာမေးပွဲကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနောက်ဆုံးနှစ်ကပြောကြားခဲ့သည် လိုအပ်သောစာမေးပွဲများသည်သူတို့၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကိုတင်ပြရန်လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်သည် သူတို့ရဲ့အမျိုးသားရေးအသနားခံစာ WHO ကလူများအတွက်အခွင့်အလမ်းအဖြစ်သက်သေပြ လူမျိုးရေးအခွင့်အလမ်းအဖြစ် NATIONAL NAME ရှိသည် နိုင်ငံအလိုက် NAME ID ကိုငြင်းခုံမှုအဆင့်တွင်မရရှိပါစေနှင့်။ ဆွေးနွေးမှုအဆင့်တွင်ရရန် ID ။ သင်အနိုင်ယူလိုလျှင်သူသွားလေ၏ သငျသညျသမ္မတအနိုင်ရချင်တယ်ဆိုရင်, သငျသညျရှိသည် ဥက္က,္ဌ, သင်မြက်အမေရိကနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ရှိသည်။ GRASSROOTS အမေရိကန်နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ PEREZ အိုင်တီကွတ်ဘယ်လိုဒီမှာ။ PEREZ အိုင်တီကွတ်ဘယ်လိုဒီမှာ။ >> AN ထဲကနေ 18 လ >> ရွေးချယ်မှုတစ်ခုမှ >> ၁၈ လသာလျှင် အကယ်၍ တစ်ခုတည်းသောလမ်းကြောင်းဖြစ်သည် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း၊ အချိန်ကာလတစ်ခုအထိလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းလမ်းလျှောက်နေသည်ဆိုပါစို့ အငြင်းပွါးဖွယ်အဆင့်သို့လှိမ့်ချနေပါတယ်, ငါတို့အစွမ်းထက်ခဲ့သည်ထင် အစွမ်းထက်သောမမှန်ဟုထင်ခဲ့သည်။ မငြိမ်မသက်။ ဒါကြောင့်ငါမြက်ပင်စဉ်းစားပါ ဒါကြောင့်ငါ Grassroots ရန်ပုံငွေရှာလမ်းကြောင်းကိုအလွန် IS ထင်ပါတယ် ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းသည်အလွန်အလားအလာရှိသောလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ အလားအလာရှိသောလမ်းကြောင်း။ လုပ်ပိုင်ခွင့်အရေးကြီးတယ် မြက်ခင်းများကိုအားဖြည့်ရန်အရေးကြီးသည်။ မြသွေးနီ။ >> အားလုံး။ >> အားလုံး။ အိုင်တီသန်းကြွယ်သူဌေးလိုမဟုတ်ဘူး အိုင်တီသန်းကြွယ်သူဌေးအစုအဝေးဒီမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီမှာစုစည်း။ အတိတ်, ငါတို့သိ KNANDIDATES အတိတ်ကာလတွင်ကျွန်ုပ်တို့သိခဲ့ကြ၊ ဘားရက်အိုဘားမားအစောပိုင်းကပြခဲ့သောသရုပ်ဆောင်များ BARACK အိုဘားမားကဲ့သို့ပင်မြက်ရိတ်များအားလုံးကိုအစောပိုင်းစိတ်အားထက်သန်မှုပြခဲ့သည်။ ဤအနှုနျးခှေးအားပေးအားမြှောက်။ အချို့သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများထက်သာ။ ကောင်း၏ ဤနှစ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအောက်၌အချို့သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများထက်ပိုကောင်းတဲ့လုပ်ပါ။ ဒီနည်းကိုဒီနှစ်ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအောက်မှာအခြား။ မိမိကိုယ်ကို BOXED Cory Booker သူကိုယ်တိုင်ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ Cory Booker ဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာအငြင်းပွါးမှုထဲကနေထွက်လာခဲ့တာပါ။ သူအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ငြင်းခုံမှုများထဲကသူအားလုံး DNC တွေ့ဆုံရန် DNC လိုအပ်ချက်များအားလုံးနှင့်မတွေ့ဆုံနိုင်ပါ။ လိုအပ်ချက်များ။ သူ၏စခန်းသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ သူ၏စခန်းဖွင့်လှစ်သောသူတို့အားလိုအပ်ချက်များကိုသူ့ကိုအမြတ်ထုတ်ခဲ့သည် သူ့အားထွက်ခွာရန်လိုအပ်ချက်များလိုအပ်နေသည်။ လူမျိုးထွက်ခွာ။ နောက်ကျောကလေးတွန်းအားပေးခဲ့သည် သူငယ်၏နောက်သို့တွန်းခဲ့သူတစ် ဦး ဝါသနာရှင်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည် သူကသူသည်ဘွတ်ကင်၏ဝါသနာရှင်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်ပရိသတ်များဖြစ်ကြသည် ဘွတ်ကင်ပေမယ့်ပရိတ်သတ်တွေစိတ်ပျက်စရာစာအုပ်စာတမ်းမရှိပါ ပျက်ပြယ်သောစာအုပ်တစ်အုပ်အရည်အချင်းမပြည့်မှီ, ပြီးတော့သူတို့တဲ့အခါ အရည်အချင်းပြည့်မှီပြီးနောက်သူတို့ကတယ်လီဖုန်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေချိန်မှာ၊ POLLSTERS အတွက်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာတယ်လီဖုန်း, သူတို့သည်၎င်းတို့ကိုဖော်ပြရန်လိုသည် သူတို့သည်မိမိတို့၏အစွမ်းကိုထုတ်ဖော်ပြသရန်လိုအပ်သည်။ CORY BOOKER အတွက်နှစ်သက်မှု။ လူတွေမကြာခဏငါတို့သိတယ် လူတွေမကြာခဏ RUSE နှင့်ပတ်သက်။ ထပ်မံတိုင်ကြားချက် OR Feeds အကြောင်းအကြောင်းရင်းနှင့်ထပ်ဆင့်တိုင်ကြားပါ။ အစာကျွေးခြင်း၏အကြောင်းရင်း။ ငါသည်သင်တို့အားလုံးကိုပြောပြတယ်ဘာကြောင့်ဒီမှာ ငါသည်ဤသူအပေါင်းတို့ကိုယနေ့ညပြောနေဘာကြောင့်ဒီမှာ။ ဒီနည်းကိုယနေ့ည။ ဒီညအကြောင်းသမိုင်း ဒီနည်းကိုဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် STORY ယနေ့ညအကြောင်း ပြောင်းလဲမှုအတွက်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအတွက်သင့်လျော်သည်ဖြစ်စေ အလယ်အလတ်စည်းကမ်းများကိုပြောင်းလဲရန်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ? အလယ်မှာစည်းမျဉ်းများ? ဒီနည်းကိုဘယ်သူ့ကိုမှမဆုံးဖြတ်ခင် ဒီနည်းကိုဘယ်သူပြောင်းလဲမလဲဆိုတာကိုဘယ်သူမှမဆုံးဖြတ်ခင်၊ ဒီနည်းအားဖြင့် WHO ကကူညီနိုင်သည် အိုင်တီအိုင်တီ WHO ကအပြောင်းအလဲ, ကူညီပေးနိုင်သည်။ ထိခိုက်စေ မေးခွန်းရဲ့အဖြေကိုကြည့်ရအောင်။ မေးခွန်းရဲ့အဖြေကိုကြည့်ရအောင်။ မဟုတ်ဘူး။ မဟုတ်ဘူး။ အိုင်တီပြောင်းလဲပစ်ရန်တရားမျှတမဟုတ်ပါဘူး အလယ်အလတ်တွင်စည်းမျဉ်းများကိုပြောင်းလဲရန်မသင့်လျော်ပါ။ အလယ်မှာစည်းမျဉ်းများ။ အကယ်။ မှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အကယ်၍ အကယ်၍ အစိုးရမှမဲပေးခြင်းကိုပြောင်းလဲပါက၎င်းသည်စစ်မှန်လိမ့်မည် အစိုးရသည်မဲပေးသည့်ဥပဒေများကိုအလယ်အလတ်ဖြစ်စေ၊ အလယ်အလတ်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်စေ၊ မည်သည့်ပါတီမှဖြစ်စေဥပဒေများ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုသို့မဟုတ်မူလတန်းအလယ်၌မည်သည့်ပါတီမဆို။ အဓိကအလယ်အလတ်။ AND ငါသိသာထင်ရှားတဲ့ထင်ပါတယ် AND ငါထင်တဲ့နေရာကနေသိသာထင်ရှားတဲ့တော်တော်လေးရှင်းပါတယ်ထင်ပါတယ် တရားမျှတမှုအပြုအမူတစ်ခုကနေတော်တော်လေးရှင်းလင်းပေမယ့်သင်မတိုင်မီ တရားမျှတပေမယ့်သင် IOWA OR THE အကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများမတိုင်မီ IOWA နှင့်ပတ်သက်သည့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ၂၀၁၆ PRIMARY သို့မဟုတ်အခြားအရာများ။ 2016 ခုနှစ်အခြားသို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အရာမဆို။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နှလုံး၌ရှိကြ၏ ဆောက်လုပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုပြီးနောက်မူလတန်း၏နှလုံးသား၌ကျွန်ုပ်တို့ဒီမှာပါ Primary အိုင်တီလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေမဟာဗျူဟာများတည်ဆောက်, နည်းဗျူဟာများ, အိုင်အိုင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေ RUSE အောက်။ RUSE အောက်။ နှင့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအများအပြားရှိသည် နှင့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအများအပြားအခုသူတို့ထွက်ပြီကျဆင်းခဲ့သည် အခုသူတို့ထွက်သွားပြီသူတို့ကဒီဆွေးနွေးငြင်းခုံအဆင့်သို့။ အဆိုပါဆွေးနွေးငြင်းခုံဖို့အိုင်တီလုပ်လေ၏။ စည်းမျဉ်းသစ်များကလျှောက်ထားချက်ပြောသည် စည်းမျဉ်းအသစ်များသည်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုယခုမပြောနိုင်ပါ အခုဆိုရင်ဆွေးနွေးငြင်းခုံ FOR THRESHOLDS တွေ့ဆုံခြင်းအားဖြင့် Make ကိုယ်စားလှယ်များသို့မဟုတ်လှိမ့်အဘို့အအစည်းအဝေးများအားဖြင့်စင်မြင့်။ DELEGATES OR Polling ။ ဥပဒေသစ်။ ဥပဒေသစ်။ ဂိမ်းအလယ်။ ဂိမ်းအလယ်။ အခုတော့တစ် ဦး ကိုချစ်တဲ့သူဒီမိုကရက်တစ် NANDANDAT တစ်လုံးကိုချစ်သောသူဒီမိုကရက်များကသာစိတ်ဝင်စားသင့်သည် CANDIDATE သည်ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အပေါ်သက်ရောက်မှုမည်မျှရှိမည်နည်း။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ကဒီအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေပုံ။ ဤသည်နေဆဲနိုင်ငံရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်နေဆဲနိုင်ငံရေးဖြစ်ပါတယ်။ TEAM အားကစား။ TEAM အားကစား။ မည်သူသည်အမြစ်တွယ်နေသနည်း။ မည်သူသည်အမြစ်တွယ်နေသနည်း။ ငါပြောမယ်၊ ငါလည်းမင်းကိုပြောနေတာ၊ ဒီဟာက A အတွက်ပိုများသောဒီမိုကရက်တစ်မေးခွန်းဖြစ်သည် ပြောဆိုသောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအတွက် ပို၍ ကြီးမားသောဒီမိုကရက်တစ်မေးခွန်း သူ၏ပလက်ဖောင်းတွင်ပြောသောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ၎င်း၏ပလက်ဖောင်းသည်အိုင်တီဒီရပ်တည်မှုဒီနှစ်ကစပွန်ဆာ ဒီနှစ်မှာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုအိုင်တီပွင့်လင်းမြင်သာခြင်းနှင့်မဲပေးခြင်းအတွက်ရပ်တည် ပွင့်လင်းမြင်သာခြင်းနှင့်မဲပေးခြင်းအတွက်။ အခွင့်အရေးများနှင့်။ NEXT FOR ယခုအချိန်အထိငါးခုအရည်အသွေး လာမည့်အငြင်းအခုန်ဘို့ယခုအထိဝေးငါးခုအရည်အသွေး။ စကားဝိုင်း သုံး ဦး တည်းဖြတ် သုံး ဦး တည်းသာလှည့်လိုအပ်ချက်ဖြတ်သန်းသွားပြီ။ Polling လိုအပ်ချက်။ ဒါပေမယ့် DNC LANE ဖွင့်လှစ်နေပါတယ် သို့သော် DNC သည်ဆS္ဌမဆန်ဒိတ်အတွက် LANE ကိုဖွင့်နေသည်။ ဆIX္ဌမကိုယ်စားလှယ်လောင်း FOR ။ AND သူတစ် ဦး က BIG ONE IS ။ AND သူတစ် ဦး က BIG ONE IS ။ ယခင်နယူးယောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Mike ယခင်နယူးယောက်အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Mike Bloomberg ။ ချစ်သူ မူရင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအောက်မှာသူ မူရင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအောက်မှာသူဒီနည်းကိုဆွေးနွေးငြင်းခုံလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ ဒီကိစ္စကိုမဆွေးနွေးနိူင်ဘူး၊ နောင်အနာဂတ်မှာဒီမိုကရက်တစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုပူးတွဲလုပ်သင့်တယ်။ NOW ကအနာဂတ်အတွက်ဒီမိုကရက်တစ်ဆွေးနွေးမှုများကိုပူးတွဲလုပ်ပါ။ ဆွေးနွေးငြင်းခုံ။ စောပါတယ်။ စောပါတယ်။ သူကအရည်အချင်းမရှိသေးပါဒါပေမဲ့သူပါပဲ သူကအရည်အချင်းမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့သူနီးကပ်လာရဲ့။ ပိတ်ပါ။ သူကပို POLL ONE လိုအပ်ပါတယ် သူကသူ့ကို 10ERS ကို AT ထားရန်နောက်ထပ် POLL လိုအပ်ပါတယ်နှင့် DNC ယခု IS သူ့ကို 10ERS AT AND DNC သည်ယခုတွင်မီးစွဲလောင်နေသည်။ မီးဖမ်း။ >> SO ကြိုးစားနေတစ် ဦး က GET >> ကြိုးစားနေဒီတော့တစ် ဦး ထက်ပိုသောမတူကွဲပြားသောအုပ်စု ပို။ မတူကွဲပြားမှုအုပ်စု, သူတို့ပြောင်းလဲသွားတယ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ, သူတို့မိုက်ကယ် BLOOMBERG များအတွက်စည်းမျဉ်းများပြောင်းလဲခဲ့သည်။ Michael Bloomberg စည်းမျဉ်းများ။ ငါထင်မှားယွင်းနေသည်။ ငါထင်မှားယွင်းနေသည်။ >> မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် PRE ကိုင်ဆောင်အဆိုပါ DNC >> မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် DNC သည်မည်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချသနည်း မဲဆန္ဒရှင်များအားမည်သူကိုရွေးချယ်မည်ကိုဆုံးဖြတ်ခြင်း၏မူလလုပ်ငန်းစဉ် သူတို့ကမဲဆန္ဒရှင်များထံမှကြားနာခြင်းနှင့်ထို့နောက်ပြောင်းလဲခြင်းဖို့လိုခငျြ ဘီလီယံနာမိုက်ကယ်မိုက်ကယ်၏စည်းမျဉ်းများကိုပြောင်းလဲခြင်း ဘီလျံနာသူဌေးမိုက်ကယ်ဘလမ်အတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ လာပြီးဆွေးနွေးမှုအဆင့်ကိုစတင်ရန် Bloom ။ ဆွေးနွေးငြင်းခုံ။ သူကဒေါ်လာ ၅၅ ဘီလီယံတန်ပါတယ်။ သူကဒေါ်လာ ၅၅ ဘီလီယံတန်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ဒေါ်လာ ၅၅ တန်သင့်လျော်သည်ဆိုပါစို့ အကယ်၍ သင်သည်ဒေါ်လာ ၅၅ ဘီလီယံတန်ကြေးရှိပါက RUSE ကိုရနိုင်မည်လား ဘီလီယံနှင့်ချီ, သင်ရုရှားရနိုင်ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုအတွက်ပြောင်းလဲပစ်။ တစ် ဦး ဆွေးနွေးငြင်းခုံ FOR ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ >> SO ဒီမှာကျနော်တို့ KNOW ဘာလဲ။ >> SO ဒီမှာကျနော်တို့ KNOW ဘာလဲ။ DNC သည်ငြင်းခုံမှုစည်းမျဉ်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် DNC သည်သူတို့၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ငြင်းခုံမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် သူတို့ကပင်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်အစွမ်းကုန်ပပျောက်ရေးအဖြစ် ထိပ်တန်းဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၏အချို့ကိုအစွမ်းကုန်ကူညီပေးခဲ့သည် ထိပ်တန်း DEMOCRATIC လျှောက်ထား၏အချို့။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ။ အမေရိကန်အထွေထွေ။ အမေရိကန်အထွေထွေ။ DNC ကအရှိန်အဟုန်မြင့်သည်ဟုဆိုခဲ့သည် DNC က၎င်းတို့သည်မြက်ရိတ်များကိုစမ်းသပ်ခြင်းကြောင့်တရားမျှတသည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ သူတို့သည်မြက်ခင်းပြင်အထောက်အပံ့ကိုစမ်းသပ်ခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အထောက်အပံ့။ ထိုအခါ DNC စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပြောင်းလဲ ထို့နောက် DNC သည်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြင့်နည်းဥပဒေအလယ်အလတ်လမ်းစဉ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့သည် တစ် ဦး တည်းသောလူတစ် ဦး ထပ်တိုးနိုင်သည့်လမ်းအတွက်လမ်း။ လူတစ် ဦး ထပ်ထည့်ပါ။ လှူဒါန်းသောအနိုင်ယူခဲ့သည် လှူဒါန်းသူရဲ့အဖွင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် အဲဒီမှာလူမျိုးပြိုင်ပွဲဖွင့်လှစ်အဆင့်များအတွက်သင့်လျော် မရှိသည့်အခါပြိုင်ပွဲများ၏အဆင့်ဆင့်မရရှိနိုင် အပြင်ဘက်တွင်အပြင်ဘက်မှထွက်လာသည့်မည်သည့်နည်းစနစ်မျှမရှိပါ သူလုပ်နေသူတို့ကိုခွဲခြားရန်အပိုဆောင်းအပြင်ဘက် သူတိုးတက်အောင်လုပ်သောသူတို့အားခွဲခြားဆက်ဆံ မဟုတ်သောသူတို့၏ထံမှတိုးတက်မှု။ မဟုတ်ဘူး။ သို့သော်တစ်ကမ္ဘာလုံးဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ သို့သော်တစ်ကမ္ဘာလုံးဖြစ်ခဲ့လျှင်၎င်းတို့တွင်အချက်အလက်များရှိနိုင်သည် သူတို့သည်မူလစည်းမျဉ်းများ၌ရှိသောအချက်များရှိနိုင်သည်။ မူလစည်းမျဉ်းများထဲသို့။ ဘာကြောင့် POSTGAME ကိုကြည့်ရတာခက်တယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ POSTGAME ကဒီထက်ပိုပြီးရေတွက်သင့်တယ် ဒီထက်ပိုပြီးရေတွက်သင့်တယ်။ မီ။ ငါမျှတဖို့ယနေ့ည။ ငါမျှတဖို့ယနေ့ည။ သောအော်ပရေတာမှငါကြားဖူးတယ် ငါပြောပြီစစ်ဆင်ရေးမှကြားဖူးတယ် ကပြောသည်, ငါတို့ကြားဖူးတယ်အခြားသတင်းများ ပြောခဲ့ရင်ငါတို့ကြားဖူးတဲ့အခြားအော်ပရေးရှင်းမှမိုက်ကယ်လ်ဆိုသူပြောခဲ့ဖူးသည် အကယ်၍ Michael Bloomberg သည်ပါတီကိုအနိုင်ယူလိုပါကမည်သူပြောသနည်း BLOOMBERG သည်ပါတီမဟုတ်ပါ၊ အုပ်ချုပ်ရေးတွင်သူအနိုင်ရရှိလိုသည် မဟုတ်ပါ၊ အာမင်ဟုသူသည်ထိုငြင်းခုံသောအဆင့်တွင်ရှိရမည် ကူညီရန်အိုင်တီအတွက်နောက်ဆုံးအဖြစ်ရှုမြင်ခံရဖို့သောဆွေးနွေးငြင်းခုံအဆင့်တွင်ဖြစ်ရန် သူ့ကိုကူညီဖို့အိုင်တီနောက်ဆုံးပေါ်အဖြစ်ကြည့်ရှုပါ။ သူ့ကို။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့အသက်ရှင်နေကြတယ် မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်နေသည့်အချိန်တစ်လျှောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်နေကြသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီမိုကရေစီစနစ်သည်တိတ်ဆိတ်နေချိန်။ ဒီမိုကရက်တစ် TESD နေပါတယ်။ တရားမျှတသော KNOW အတွက်မဲပေးမှုမရှိပါ။ တရားမျှတသော KNOW အတွက်မဲပေးမှုမရှိပါ။ ဒီမိုကရက်တစ် Chery FOR AS ။ ဒီမိုကရက်တစ် Chery FOR AS ။ ဒါကမှန်တယ်လား ဒါကမှန်တယ်လား THE အိုင်တီပြောင်းလဲပစ်ရန်တရားမျှတ IS တချို့ကပဲမေးတောလမ်းများ MID အလယ်အလတ်ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်သင့်သည် တချို့လူတွေကနည်းနည်းမေးပါလမ်းပြအလယ်ပိုင်းနည်းဥပဒေများ Tom ။ >> WE RUSE ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ >> WE RUSE ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူတို့သည်အလွန်ပွင့်လင်း AND
Dem Party ၏ဥက္က2020္ဌမှ“ ဥပဒေသစ်ကိုမပြောင်းလဲနိုင်ဘူး” ဟုပြောပြီးနောက် ၂၀၂၀ စည်းမျဉ်းများအလယ်ပိုင်းကိုပြောင်းလဲ
< start="6.14" dur="0.833"> >>> ကြိုဆိုပါ၏နောက်သို့။ >
< start="7.008" dur="1.166"> >>> ကြိုဆိုပါ၏နောက်သို့။ ကွဲပြားခြားနားဖို့, ငါတို့ >
< start="8.175" dur="1.501"> ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအထူးအစီရင်ခံစာတစ်စုံတစ်ခုအတွက် >
< start="9.677" dur="1.968"> ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအထူးအစီရင်ခံစာ >
< start="11.679" dur="1.5"> ဤသူသည်အဆုံးစွန်ဒီမိုကရက်တစ်ဆန်ခါတင်ဖြစ်သူပုံသဏ္ULာန်နိုင်ပါတယ် >
< start="13.214" dur="1.3"> TRUMP ဆန့်ကျင်ပြေးဖို့နောက်ဆုံးဒီမိုကရက်တစ်ဆန်ခါတင်။ >
< start="14.549" dur="1"> Trump ကျော်ပြေး။ လူတွေဘယ်လောက်ရှိခဲ့ပြီလဲ >
< start="15.55" dur="1.634"> ဒီလူတွေဘယ်လောက်အထိဒီဒီမိုကရက်တစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုပြေးကြတာလဲ >
< start="17.185" dur="1.9"> ဒီ DEMOCRATIC PRESIDENTIAL NOMINATION FOR RUNNING? >
< start="19.087" dur="2.501"> ဥက္ကN္ဌအမည်စာရင်း? ၂၈ နှစ်ခန့်၊ အကယ်၍ မင်းအားလုံးကိုသူတို့ရေတွက်လျှင် >
< start="21.589" dur="0.399"> ၂၈ နှစ်ခန့်၊ အကယ်၍ မင်းအားလုံးကိုသူတို့ရေတွက်လျှင်။ >
< start="21.989" dur="2.202"> UP ။ အိုင်တီကဲ့သို့ခံစားရခံစားရ >
< start="24.225" dur="0.766"> ပြိုင်ဘက်အရေအတွက်နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးပေါ့။ >
< start="24.993" dur="1.299"> ပြိုင်ဘက်နည်းသည် သောမီ, သောကြောင့် >
< start="26.294" dur="1.901"> ပထမ ဦး ဆုံးမဲပေးနေစတင်ခဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သော >
< start="28.196" dur="2.301"> ပထမ ဦး ဆုံးဆန္ဒမဲစတင်ခြင်းစတင်ခဲ့ပြီးမဲဆန္ဒရှင်များမကြာခဏအစစ်အမှန်ကြည့်ရှုပါ >
< start="30.498" dur="1.667"> အတိတ်, မဲဆန္ဒရှင်များမကြာခဏသူတို့ကဲ့သို့အစစ်အမှန်ပြိုင်ဘက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုကြည့်ပါ >
< start="32.2" dur="1.5"> ပြိုင်ဘက်ပြိုင်ပွဲဝင်သူများသည်ပြိုင်ပွဲအဆင့်ကိုတက်ရောက်သူများဖြစ်သည်။ >
< start="33.735" dur="0.899"> အဘယ်သူသည်ဆွေးနွေးငြင်းခုံအဆင့်။ သောအရေးကြီးသောစေသည်။ >
< start="34.669" dur="2.535"> သောအရေးကြီးသောစေသည်။ အကယ်၍ သင်သည်နောက်ဆုံးခုနစ်ခုမဟုတ်ပါက >
< start="37.205" dur="2.067"> အကယ်၍ သင်သည်နောက်ဆုံးခုနစ်ခုတွင်ထိပ်ဆုံးခုနစ်ခုမဟုတ်ပါကမည်မျှအလေးအနက်ထားမည်နည်း >
< start="39.274" dur="2.134"> မဲဆန္ဒရှင်များအနေဖြင့်သင့်အားမည်ကဲ့သို့အလေးအနက်ထားသင့်သနည်း။ >
< start="41.442" dur="2.468"> မဲဆန္ဒရှင်များကသင့်ကိုယူသင့်ပါသလား။ သောနံပါတ်ဖွစျသညျ >
< start="43.912" dur="1.8"> သောသောနေ့က ANDREW AND AND ANDREW သောကြာနေ့ကခြောက်ကြိမ်မြောက်ကျရှုံးခဲ့သည် >
< start="45.713" dur="0.833"> ANDREW YANG နှင့်အတူသောကြာနေ့ခြောက်ရက်မှစ။ ဆင်း။ >
< start="46.581" dur="2.835"> YANG မှထွက်ကျဆင်းနေသည်။ ခင်ဗျားတို့တော်တော်လေးသိမယ်ဆိုရင်တောင် >
< start="49.417" dur="1.267"> သငျသညျ Pretty ကောင်းကောင်းသိရင်ဒါမှမဟုတ်အများကြီးရှိသည်လျှင်ပင် >
< start="50.685" dur="2.535"> သို့မဟုတ်ငွေအမြောက်အများ ရှိ၍၊ အငြင်းပွားမှုအဆင့်သည်ကြီးမားနိုင်သည် >
< start="53.221" dur="2.001"> အငြင်းပွားမှုအဆင့်အကြီးအကျယ်ကွဲပြားစေနိုင်သည်။ >
< start="55.256" dur="1.968"> ကွဲပြားမှု။ ဘီလျံနာသူဌေးကြီး Ross ကပြောကြားသည် >
< start="57.225" dur="1.367"> ဘီလျံနာသူဌေးကြီး Ross ကသူတစ် ဦး ကဖန်ဆင်းတော်မူသည်ထင်ခဲ့ပါဘူး >
< start="58.626" dur="2.202"> သူကအိုင်တီမစဉ်းစားခဲ့ပါဘူးကွဲပြားခြားနားပေမယ့်အားလုံးလုပ်လေ၏ >
< start="60.862" dur="1.701"> ကွဲပြားမှုသို့သော်အိုင်တီသူ၏မလုံခြုံရန်အတွက်ကွဲပြားမှုအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ >
< start="62.597" dur="0.333"> သူ၏မငြိမ်မသက်လှုပ်ရှားမှုအတွက်ကွဲပြားမှု။ >
< start="62.964" dur="1.067"> ကမ်ပိန်း။ >> သင်ထင်လိမ့်မယ်ထင်သလား >
< start="64.032" dur="2.268"> >> သင်ကငြင်းခုံမှုများတွင်ပါ ၀ င်လိမ့်မည်ဟုသင်ထင်ပါသလား။ >
< start="66.334" dur="2.401"> ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများတွင်ပါဝင်သည်? >> ငါဂရုမစိုက်နိုင်ဘူး။ >
< start="68.737" dur="2.501"> >> ငါဂရုမစိုက်နိုင်ဘူး။ >> သင်ဖြစ်လို။ >
< start="71.273" dur="1.567"> >> သင်ဖြစ်လို။ >> ငါ OF LOVE လို။ >
< start="72.841" dur="2.535"> >> ငါ OF LOVE လို။ >> Ross Perotot ဖိတ်ကြားခဲ့သည် >
< start="75.41" dur="0.9"> >> ROSS PEROT ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်၌ပါဝင်ရန်။ >
< start="76.311" dur="1.434"> ၌ပါဝင်ရန် >> သင်သည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သင့်သည် >
< start="77.746" dur="2.167"> >> အကယ်၍ သင်သာ ၅% သာလည်ပတ်နေပါကအဘယ်ကြောင့်သင်အငြင်းပွားမှုတွင်ရှိနေသင့်သနည်း >
< start="79.915" dur="0.732"> အကယ်၍ သင်ကပင်စုစုပေါင်း၏ ၅% ကိုသာအပြည့်အ ၀ လည်ပတ်နေပါကငြင်းခုံမှုရှိပါသလား >
< start="80.649" dur="1.867"> စာအုပ်၏? >> ငါတို့အားလုံးကိုတွေ့သောကြောင့် >
< start="82.518" dur="2.434"> >> ကျွန်ုပ်တို့သည်ငြင်းခုံမှု၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်များကိုတွေ့သောကြောင့် >
< start="84.986" dur="0.366"> DEBATE ကော်မရှင်၏ရည်ရွယ်ချက်များ။ >
< start="85.353" dur="0.867"> ကော်မရှင်။ ကျနော်တို့နောက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှု၌ရှိကြ၏ >
< start="86.254" dur="1.801"> ကျနော်တို့နောက်ဆုံးသောအချိန်၌ရောက်နေတယ်ကျနော်တို့ပါဝင်သည်ခဲ့ကြသည် >
< start="88.089" dur="0.3"> TIME နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အငြင်းပွားမှုများတွင်ပါ ၀ င်သည်။ >
< start="88.423" dur="3.236"> ဆွေးနွေးငြင်းခုံ။ >> SO အဘယ်အရာကိုရည်ရွယ်သည် >
< start="91.693" dur="0.333"> >> ဒီတော့ဘာရည်ရွယ်ချက်ကို CRITERIA စေသည်? >
< start="92.06" dur="1.801"> CRITERIA? မူလတန်းမှာတော့ပါတီ >
< start="93.862" dur="0.299"> မူလတန်းမှာတော့ပါတီဆုံးဖြတ်သည်။ >
< start="94.196" dur="1.967"> ဆုံးဖြတ်။ ဒါကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောမီဒီယာ OLLETS >
< start="96.164" dur="2.668"> ဒီတော့ကွဲပြားခြားနားသောမီဒီယာထုတ်လွှင့်အမြစ်တွယ်ထွက်လာနေတုန်း >
< start="98.867" dur="1"> ဤအငြင်းခုံထုတ်လွှင့် ROTATE, ယနေ့ညဖြစ်ပါတယ် >
< start="99.868" dur="1.701"> ဆွေးနွေးငြင်းခုံ, အိုင်တီယနေ့ညဉ့် DEMOCRATIC ပါတီဖြစ်ပါတယ် >
< start="101.57" dur="1.767"> သူတို့ထဲ၌ရှိသော WHO အတွက်သတ်မှတ်ထားသည့်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ။ >
< start="103.338" dur="1.234"> သူတို့တွင်အဘယ်သူသည် CRITERIA ။ ဒီနည်းကိုဖြစ်စေ၊ ချိုးနိုင်သလား။ >
< start="104.573" dur="4.47"> ဒီနည်းကိုဖြစ်စေ၊ ချိုးနိုင်သလား။ ဒီစက်ဝိုင်း, DNC လုပ်စည်းမျဉ်းများ, >
< start="109.044" dur="2.335"> ဒီစက်ဝန်း, DNC စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ, လျှောက်ထားတစ် ဦး တွေ့ဆုံရမည် >
< start="111.413" dur="1.801"> ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများတစ် ဦး အပြည့်အဝလှိမ့်ခြစ်သို့မဟုတ်ပုံဆွဲရပါမည် >
< start="113.248" dur="1.2"> THRESHOLD သို့မဟုတ် DRAW မှကောက်ယူစုဆောင်းထားသောရန်ပုံငွေရှာ >
< start="114.449" dur="1"> လူပေါင်း ၆၅၀၀၀ မှအလှူငွေကောက်ခံခြင်း။ >
< start="115.45" dur="2.034"> 65,000 လူတွေ။ အခုသူတို့ဘာဖြစ်လို့လှူဒါန်းတာလဲ >
< start="117.486" dur="0.9"> အခုဒီအလှူငွေများကိုဘာကြောင့်လိုအပ်ရတာလဲ။ >
< start="118.42" dur="3.503"> အားလုံးလိုအပ်ချက်? DNC သဘာပတိကနောက်ဆုံးနှစ်တွင်ပြောခဲ့သည်။ >
< start="121.957" dur="1.334"> DNC ဥက္ကCH္ဌလိုအပ်ချက်စာမေးပွဲကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနောက်ဆုံးနှစ်ကပြောကြားခဲ့သည် >
< start="123.292" dur="1.567"> လိုအပ်သောစာမေးပွဲများသည်သူတို့၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကိုတင်ပြရန်လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်သည် >
< start="124.86" dur="1.4"> သူတို့ရဲ့အမျိုးသားရေးအသနားခံစာ WHO ကလူများအတွက်အခွင့်အလမ်းအဖြစ်သက်သေပြ >
< start="126.261" dur="1.734"> လူမျိုးရေးအခွင့်အလမ်းအဖြစ် NATIONAL NAME ရှိသည် >
< start="127.996" dur="3.002"> နိုင်ငံအလိုက် NAME ID ကိုငြင်းခုံမှုအဆင့်တွင်မရရှိပါစေနှင့်။ >
< start="131.032" dur="1.601"> ဆွေးနွေးမှုအဆင့်တွင်ရရန် ID ။ သင်အနိုင်ယူလိုလျှင်သူသွားလေ၏ >
< start="132.668" dur="1.734"> သငျသညျသမ္မတအနိုင်ရချင်တယ်ဆိုရင်, သငျသညျရှိသည် >
< start="134.436" dur="1.534"> ဥက္က,္ဌ, သင်မြက်အမေရိကနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ရှိသည်။ >
< start="136.004" dur="2.202"> GRASSROOTS အမေရိကန်နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ PEREZ အိုင်တီကွတ်ဘယ်လိုဒီမှာ။ >
< start="138.24" dur="1.801"> PEREZ အိုင်တီကွတ်ဘယ်လိုဒီမှာ။ >> AN ထဲကနေ 18 လ >
< start="140.075" dur="2.535"> >> ရွေးချယ်မှုတစ်ခုမှ >> ၁၈ လသာလျှင် အကယ်၍ တစ်ခုတည်းသောလမ်းကြောင်းဖြစ်သည် >
< start="142.611" dur="3.503"> ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း၊ အချိန်ကာလတစ်ခုအထိလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းလမ်းလျှောက်နေသည်ဆိုပါစို့ >
< start="146.148" dur="1.567"> အငြင်းပွါးဖွယ်အဆင့်သို့လှိမ့်ချနေပါတယ်, ငါတို့အစွမ်းထက်ခဲ့သည်ထင် >
< start="147.717" dur="0.332"> အစွမ်းထက်သောမမှန်ဟုထင်ခဲ့သည်။ >
< start="148.083" dur="4.637"> မငြိမ်မသက်။ ဒါကြောင့်ငါမြက်ပင်စဉ်းစားပါ >
< start="152.721" dur="2.568"> ဒါကြောင့်ငါ Grassroots ရန်ပုံငွေရှာလမ်းကြောင်းကိုအလွန် IS ထင်ပါတယ် >
< start="155.291" dur="2.635"> ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းသည်အလွန်အလားအလာရှိသောလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ >
< start="157.927" dur="5.771"> အလားအလာရှိသောလမ်းကြောင်း။ လုပ်ပိုင်ခွင့်အရေးကြီးတယ် >
< start="163.699" dur="0.399"> မြက်ခင်းများကိုအားဖြည့်ရန်အရေးကြီးသည်။ >
< start="164.099" dur="0.833"> မြသွေးနီ။ >> အားလုံး။ >
< start="164.934" dur="1.6"> >> အားလုံး။ အိုင်တီသန်းကြွယ်သူဌေးလိုမဟုတ်ဘူး >
< start="166.536" dur="0.565"> အိုင်တီသန်းကြွယ်သူဌေးအစုအဝေးဒီမှာမဟုတ်ပါဘူး။ >
< start="167.102" dur="1.4"> ဒီမှာစုစည်း။ အတိတ်, ငါတို့သိ KNANDIDATES >
< start="168.504" dur="3.235"> အတိတ်ကာလတွင်ကျွန်ုပ်တို့သိခဲ့ကြ၊ ဘားရက်အိုဘားမားအစောပိုင်းကပြခဲ့သောသရုပ်ဆောင်များ >
< start="171.741" dur="1.466"> BARACK အိုဘားမားကဲ့သို့ပင်မြက်ရိတ်များအားလုံးကိုအစောပိုင်းစိတ်အားထက်သန်မှုပြခဲ့သည်။ >
< start="173.209" dur="1.934"> ဤအနှုနျးခှေးအားပေးအားမြှောက်။ အချို့သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများထက်သာ။ ကောင်း၏ >
< start="175.178" dur="3.836"> ဤနှစ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအောက်၌အချို့သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများထက်ပိုကောင်းတဲ့လုပ်ပါ။ >
< start="179.048" dur="1.467"> ဒီနည်းကိုဒီနှစ်ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအောက်မှာအခြား။ မိမိကိုယ်ကို BOXED Cory Booker >
< start="180.516" dur="1.634"> သူကိုယ်တိုင်ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ Cory Booker ဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာအငြင်းပွါးမှုထဲကနေထွက်လာခဲ့တာပါ။ >
< start="182.151" dur="1.968"> သူအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ငြင်းခုံမှုများထဲကသူအားလုံး DNC တွေ့ဆုံရန် >
< start="184.12" dur="0.432"> DNC လိုအပ်ချက်များအားလုံးနှင့်မတွေ့ဆုံနိုင်ပါ။ >
< start="184.554" dur="2.801"> လိုအပ်ချက်များ။ သူ၏စခန်းသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ >
< start="187.389" dur="1.901"> သူ၏စခန်းဖွင့်လှစ်သောသူတို့အားလိုအပ်ချက်များကိုသူ့ကိုအမြတ်ထုတ်ခဲ့သည် >
< start="189.325" dur="1.334"> သူ့အားထွက်ခွာရန်လိုအပ်ချက်များလိုအပ်နေသည်။ >
< start="190.66" dur="1.5"> လူမျိုးထွက်ခွာ။ နောက်ကျောကလေးတွန်းအားပေးခဲ့သည် >
< start="192.195" dur="1.333"> သူငယ်၏နောက်သို့တွန်းခဲ့သူတစ် ဦး ဝါသနာရှင်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည် >
< start="193.562" dur="2.068"> သူကသူသည်ဘွတ်ကင်၏ဝါသနာရှင်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်ပရိသတ်များဖြစ်ကြသည် >
< start="195.631" dur="1.3"> ဘွတ်ကင်ပေမယ့်ပရိတ်သတ်တွေစိတ်ပျက်စရာစာအုပ်စာတမ်းမရှိပါ >
< start="196.933" dur="2.434"> ပျက်ပြယ်သောစာအုပ်တစ်အုပ်အရည်အချင်းမပြည့်မှီ, ပြီးတော့သူတို့တဲ့အခါ >
< start="199.369" dur="2.601"> အရည်အချင်းပြည့်မှီပြီးနောက်သူတို့ကတယ်လီဖုန်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေချိန်မှာ၊ >
< start="201.971" dur="2.501"> POLLSTERS အတွက်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာတယ်လီဖုန်း, သူတို့သည်၎င်းတို့ကိုဖော်ပြရန်လိုသည် >
< start="204.474" dur="1.9"> သူတို့သည်မိမိတို့၏အစွမ်းကိုထုတ်ဖော်ပြသရန်လိုအပ်သည်။ >
< start="206.408" dur="1.067"> CORY BOOKER အတွက်နှစ်သက်မှု။ လူတွေမကြာခဏငါတို့သိတယ် >
< start="207.477" dur="1.767"> လူတွေမကြာခဏ RUSE နှင့်ပတ်သက်။ ထပ်မံတိုင်ကြားချက် OR >
< start="209.278" dur="1.501"> Feeds အကြောင်းအကြောင်းရင်းနှင့်ထပ်ဆင့်တိုင်ကြားပါ။ >
< start="210.78" dur="2.802"> အစာကျွေးခြင်း၏အကြောင်းရင်း။ ငါသည်သင်တို့အားလုံးကိုပြောပြတယ်ဘာကြောင့်ဒီမှာ >
< start="213.583" dur="3.102"> ငါသည်ဤသူအပေါင်းတို့ကိုယနေ့ညပြောနေဘာကြောင့်ဒီမှာ။ >
< start="216.719" dur="1.567"> ဒီနည်းကိုယနေ့ည။ ဒီညအကြောင်းသမိုင်း >
< start="218.288" dur="4.202"> ဒီနည်းကိုဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် STORY ယနေ့ညအကြောင်း >
< start="222.492" dur="2.768"> ပြောင်းလဲမှုအတွက်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအတွက်သင့်လျော်သည်ဖြစ်စေ >
< start="225.294" dur="1.401"> အလယ်အလတ်စည်းကမ်းများကိုပြောင်းလဲရန်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ? >
< start="226.729" dur="1.634"> အလယ်မှာစည်းမျဉ်းများ? ဒီနည်းကိုဘယ်သူ့ကိုမှမဆုံးဖြတ်ခင် >
< start="228.398" dur="2.101"> ဒီနည်းကိုဘယ်သူပြောင်းလဲမလဲဆိုတာကိုဘယ်သူမှမဆုံးဖြတ်ခင်၊ ဒီနည်းအားဖြင့် WHO ကကူညီနိုင်သည် >
< start="230.5" dur="0.299"> အိုင်တီအိုင်တီ WHO ကအပြောင်းအလဲ, ကူညီပေးနိုင်သည်။ >
< start="230.8" dur="1.801"> ထိခိုက်စေ မေးခွန်းရဲ့အဖြေကိုကြည့်ရအောင်။ >
< start="232.602" dur="0.266"> မေးခွန်းရဲ့အဖြေကိုကြည့်ရအောင်။ မဟုတ်ဘူး။ >
< start="232.869" dur="1.534"> မဟုတ်ဘူး။ အိုင်တီပြောင်းလဲပစ်ရန်တရားမျှတမဟုတ်ပါဘူး >
< start="234.437" dur="0.8"> အလယ်အလတ်တွင်စည်းမျဉ်းများကိုပြောင်းလဲရန်မသင့်လျော်ပါ။ >
< start="235.271" dur="1.501"> အလယ်မှာစည်းမျဉ်းများ။ အကယ်။ မှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင် >
< start="236.773" dur="1.233"> အကယ်၍ အကယ်၍ အစိုးရမှမဲပေးခြင်းကိုပြောင်းလဲပါက၎င်းသည်စစ်မှန်လိမ့်မည် >
< start="238.041" dur="1.366"> အစိုးရသည်မဲပေးသည့်ဥပဒေများကိုအလယ်အလတ်ဖြစ်စေ၊ >
< start="239.409" dur="1.3"> အလယ်အလတ်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်စေ၊ မည်သည့်ပါတီမှဖြစ်စေဥပဒေများ >
< start="240.71" dur="2.768"> နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုသို့မဟုတ်မူလတန်းအလယ်၌မည်သည့်ပါတီမဆို။ >
< start="243.513" dur="3.903"> အဓိကအလယ်အလတ်။ AND ငါသိသာထင်ရှားတဲ့ထင်ပါတယ် >
< start="247.45" dur="2.335"> AND ငါထင်တဲ့နေရာကနေသိသာထင်ရှားတဲ့တော်တော်လေးရှင်းပါတယ်ထင်ပါတယ် >
< start="249.819" dur="3.202"> တရားမျှတမှုအပြုအမူတစ်ခုကနေတော်တော်လေးရှင်းလင်းပေမယ့်သင်မတိုင်မီ >
< start="253.022" dur="3.203"> တရားမျှတပေမယ့်သင် IOWA OR THE အကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများမတိုင်မီ >
< start="256.259" dur="2.135"> IOWA နှင့်ပတ်သက်သည့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ၂၀၁၆ PRIMARY သို့မဟုတ်အခြားအရာများ။ >
< start="258.428" dur="2.668"> 2016 ခုနှစ်အခြားသို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အရာမဆို။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နှလုံး၌ရှိကြ၏ >
< start="261.097" dur="4.938"> ဆောက်လုပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုပြီးနောက်မူလတန်း၏နှလုံးသား၌ကျွန်ုပ်တို့ဒီမှာပါ >
< start="266.069" dur="1.968"> Primary အိုင်တီလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေမဟာဗျူဟာများတည်ဆောက်, >
< start="268.038" dur="0.9"> နည်းဗျူဟာများ, အိုင်အိုင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေ RUSE အောက်။ >
< start="268.939" dur="2.268"> RUSE အောက်။ နှင့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအများအပြားရှိသည် >
< start="271.241" dur="3.803"> နှင့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအများအပြားအခုသူတို့ထွက်ပြီကျဆင်းခဲ့သည် >
< start="275.045" dur="3.002"> အခုသူတို့ထွက်သွားပြီသူတို့ကဒီဆွေးနွေးငြင်းခုံအဆင့်သို့။ >
< start="278.081" dur="2.602"> အဆိုပါဆွေးနွေးငြင်းခုံဖို့အိုင်တီလုပ်လေ၏။ စည်းမျဉ်းသစ်များကလျှောက်ထားချက်ပြောသည် >
< start="280.717" dur="1.501"> စည်းမျဉ်းအသစ်များသည်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုယခုမပြောနိုင်ပါ >
< start="282.219" dur="2.201"> အခုဆိုရင်ဆွေးနွေးငြင်းခုံ FOR THRESHOLDS တွေ့ဆုံခြင်းအားဖြင့် Make >
< start="284.421" dur="1.2"> ကိုယ်စားလှယ်များသို့မဟုတ်လှိမ့်အဘို့အအစည်းအဝေးများအားဖြင့်စင်မြင့်။ >
< start="285.622" dur="0.8"> DELEGATES OR Polling ။ ဥပဒေသစ်။ >
< start="286.423" dur="1.2"> ဥပဒေသစ်။ ဂိမ်းအလယ်။ >
< start="287.624" dur="1.801"> ဂိမ်းအလယ်။ အခုတော့တစ် ဦး ကိုချစ်တဲ့သူဒီမိုကရက်တစ် >
< start="289.426" dur="1.934"> NANDANDAT တစ်လုံးကိုချစ်သောသူဒီမိုကရက်များကသာစိတ်ဝင်စားသင့်သည် >
< start="291.395" dur="1.667"> CANDIDATE သည်ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အပေါ်သက်ရောက်မှုမည်မျှရှိမည်နည်း။ >
< start="293.063" dur="1.334"> ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ကဒီအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေပုံ။ ဤသည်နေဆဲနိုင်ငံရေးဖြစ်ပါတယ်။ >
< start="294.431" dur="0.533"> ဤသည်နေဆဲနိုင်ငံရေးဖြစ်ပါတယ်။ TEAM အားကစား။ >
< start="294.965" dur="1.6"> TEAM အားကစား။ မည်သူသည်အမြစ်တွယ်နေသနည်း။ >
< start="296.567" dur="2.2"> မည်သူသည်အမြစ်တွယ်နေသနည်း။ ငါပြောမယ်၊ >
< start="298.769" dur="1.2"> ငါလည်းမင်းကိုပြောနေတာ၊ ဒီဟာက A အတွက်ပိုများသောဒီမိုကရက်တစ်မေးခွန်းဖြစ်သည် >
< start="299.97" dur="1.801"> ပြောဆိုသောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအတွက် ပို၍ ကြီးမားသောဒီမိုကရက်တစ်မေးခွန်း >
< start="301.805" dur="1.835"> သူ၏ပလက်ဖောင်းတွင်ပြောသောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ >
< start="303.674" dur="1.867"> ၎င်း၏ပလက်ဖောင်းသည်အိုင်တီဒီရပ်တည်မှုဒီနှစ်ကစပွန်ဆာ >
< start="305.543" dur="4.936"> ဒီနှစ်မှာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုအိုင်တီပွင့်လင်းမြင်သာခြင်းနှင့်မဲပေးခြင်းအတွက်ရပ်တည် >
< start="310.48" dur="1.501"> ပွင့်လင်းမြင်သာခြင်းနှင့်မဲပေးခြင်းအတွက်။ >
< start="311.982" dur="2.902"> အခွင့်အရေးများနှင့်။ NEXT FOR ယခုအချိန်အထိငါးခုအရည်အသွေး >
< start="314.918" dur="0.566"> လာမည့်အငြင်းအခုန်ဘို့ယခုအထိဝေးငါးခုအရည်အသွေး။ >
< start="315.486" dur="5.203"> စကားဝိုင်း သုံး ဦး တည်းဖြတ် >
< start="320.691" dur="0.633"> သုံး ဦး တည်းသာလှည့်လိုအပ်ချက်ဖြတ်သန်းသွားပြီ။ >
< start="321.358" dur="1.934"> Polling လိုအပ်ချက်။ ဒါပေမယ့် DNC LANE ဖွင့်လှစ်နေပါတယ် >
< start="323.293" dur="1.067"> သို့သော် DNC သည်ဆS္ဌမဆန်ဒိတ်အတွက် LANE ကိုဖွင့်နေသည်။ >
< start="324.361" dur="3.136"> ဆIX္ဌမကိုယ်စားလှယ်လောင်း FOR ။ AND သူတစ် ဦး က BIG ONE IS ။ >
< start="327.531" dur="2.836"> AND သူတစ် ဦး က BIG ONE IS ။ ယခင်နယူးယောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Mike >
< start="330.401" dur="0.366"> ယခင်နယူးယောက်အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Mike Bloomberg ။ >
< start="330.768" dur="1.433"> ချစ်သူ မူရင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအောက်မှာသူ >
< start="332.203" dur="1.3"> မူရင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအောက်မှာသူဒီနည်းကိုဆွေးနွေးငြင်းခုံလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ >
< start="333.537" dur="2.402"> ဒီကိစ္စကိုမဆွေးနွေးနိူင်ဘူး၊ နောင်အနာဂတ်မှာဒီမိုကရက်တစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုပူးတွဲလုပ်သင့်တယ်။ >
< start="335.973" dur="0.333"> NOW ကအနာဂတ်အတွက်ဒီမိုကရက်တစ်ဆွေးနွေးမှုများကိုပူးတွဲလုပ်ပါ။ >
< start="336.307" dur="0.799"> ဆွေးနွေးငြင်းခုံ။ စောပါတယ်။ >
< start="337.141" dur="2.568"> စောပါတယ်။ သူကအရည်အချင်းမရှိသေးပါဒါပေမဲ့သူပါပဲ >
< start="339.71" dur="0.299"> သူကအရည်အချင်းမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့သူနီးကပ်လာရဲ့။ >
< start="340.01" dur="1.934"> ပိတ်ပါ။ သူကပို POLL ONE လိုအပ်ပါတယ် >
< start="341.979" dur="9.342"> သူကသူ့ကို 10ERS ကို AT ထားရန်နောက်ထပ် POLL လိုအပ်ပါတယ်နှင့် DNC ယခု IS >
< start="351.322" dur="1.367"> သူ့ကို 10ERS AT AND DNC သည်ယခုတွင်မီးစွဲလောင်နေသည်။ >
< start="352.69" dur="2.034"> မီးဖမ်း။ >> SO ကြိုးစားနေတစ် ဦး က GET >
< start="354.759" dur="1.567"> >> ကြိုးစားနေဒီတော့တစ် ဦး ထက်ပိုသောမတူကွဲပြားသောအုပ်စု >
< start="356.327" dur="2.902"> ပို။ မတူကွဲပြားမှုအုပ်စု, သူတို့ပြောင်းလဲသွားတယ် >
< start="359.23" dur="1.2"> ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ, သူတို့မိုက်ကယ် BLOOMBERG များအတွက်စည်းမျဉ်းများပြောင်းလဲခဲ့သည်။ >
< start="360.431" dur="1.834"> Michael Bloomberg စည်းမျဉ်းများ။ ငါထင်မှားယွင်းနေသည်။ >
< start="362.299" dur="3.936"> ငါထင်မှားယွင်းနေသည်။ >> မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် PRE ကိုင်ဆောင်အဆိုပါ DNC >
< start="366.237" dur="1.7"> >> မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် DNC သည်မည်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချသနည်း >
< start="367.972" dur="1.066"> မဲဆန္ဒရှင်များအားမည်သူကိုရွေးချယ်မည်ကိုဆုံးဖြတ်ခြင်း၏မူလလုပ်ငန်းစဉ် >
< start="369.04" dur="1.734"> သူတို့ကမဲဆန္ဒရှင်များထံမှကြားနာခြင်းနှင့်ထို့နောက်ပြောင်းလဲခြင်းဖို့လိုခငျြ >
< start="370.808" dur="2.235"> ဘီလီယံနာမိုက်ကယ်မိုက်ကယ်၏စည်းမျဉ်းများကိုပြောင်းလဲခြင်း >
< start="373.077" dur="1.501"> ဘီလျံနာသူဌေးမိုက်ကယ်ဘလမ်အတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ >
< start="374.612" dur="1.734"> လာပြီးဆွေးနွေးမှုအဆင့်ကိုစတင်ရန် Bloom ။ >
< start="376.38" dur="1.501"> ဆွေးနွေးငြင်းခုံ။ သူကဒေါ်လာ ၅၅ ဘီလီယံတန်ပါတယ်။ >
< start="377.915" dur="1.834"> သူကဒေါ်လာ ၅၅ ဘီလီယံတန်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ဒေါ်လာ ၅၅ တန်သင့်လျော်သည်ဆိုပါစို့ >
< start="379.75" dur="2.301"> အကယ်၍ သင်သည်ဒေါ်လာ ၅၅ ဘီလီယံတန်ကြေးရှိပါက RUSE ကိုရနိုင်မည်လား >
< start="382.053" dur="1.6"> ဘီလီယံနှင့်ချီ, သင်ရုရှားရနိုင်ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုအတွက်ပြောင်းလဲပစ်။ >
< start="383.655" dur="1.3"> တစ် ဦး ဆွေးနွေးငြင်းခုံ FOR ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ >> SO ဒီမှာကျနော်တို့ KNOW ဘာလဲ။ >
< start="384.989" dur="2.936"> >> SO ဒီမှာကျနော်တို့ KNOW ဘာလဲ။ DNC သည်ငြင်းခုံမှုစည်းမျဉ်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် >
< start="387.959" dur="1.7"> DNC သည်သူတို့၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ငြင်းခုံမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် >
< start="389.661" dur="2.067"> သူတို့ကပင်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်အစွမ်းကုန်ပပျောက်ရေးအဖြစ် >
< start="391.729" dur="1.4"> ထိပ်တန်းဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၏အချို့ကိုအစွမ်းကုန်ကူညီပေးခဲ့သည် >
< start="393.131" dur="0.399"> ထိပ်တန်း DEMOCRATIC လျှောက်ထား၏အချို့။ >
< start="393.531" dur="0.533"> ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ။ အမေရိကန်အထွေထွေ။ >
< start="394.065" dur="2.468"> အမေရိကန်အထွေထွေ။ DNC ကအရှိန်အဟုန်မြင့်သည်ဟုဆိုခဲ့သည် >
< start="396.534" dur="2.134"> DNC က၎င်းတို့သည်မြက်ရိတ်များကိုစမ်းသပ်ခြင်းကြောင့်တရားမျှတသည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ >
< start="398.703" dur="0.399"> သူတို့သည်မြက်ခင်းပြင်အထောက်အပံ့ကိုစမ်းသပ်ခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ >
< start="399.137" dur="2.635"> အထောက်အပံ့။ ထိုအခါ DNC စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပြောင်းလဲ >
< start="401.806" dur="4.838"> ထို့နောက် DNC သည်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြင့်နည်းဥပဒေအလယ်အလတ်လမ်းစဉ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့သည် >
< start="406.678" dur="2.301"> တစ် ဦး တည်းသောလူတစ် ဦး ထပ်တိုးနိုင်သည့်လမ်းအတွက်လမ်း။ >
< start="409.014" dur="3.168"> လူတစ် ဦး ထပ်ထည့်ပါ။ လှူဒါန်းသောအနိုင်ယူခဲ့သည် >
< start="412.183" dur="0.7"> လှူဒါန်းသူရဲ့အဖွင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် >
< start="412.884" dur="1.267"> အဲဒီမှာလူမျိုးပြိုင်ပွဲဖွင့်လှစ်အဆင့်များအတွက်သင့်လျော် >
< start="414.185" dur="2.201"> မရှိသည့်အခါပြိုင်ပွဲများ၏အဆင့်ဆင့်မရရှိနိုင် >
< start="416.387" dur="1.801"> အပြင်ဘက်တွင်အပြင်ဘက်မှထွက်လာသည့်မည်သည့်နည်းစနစ်မျှမရှိပါ >
< start="418.189" dur="1.567"> သူလုပ်နေသူတို့ကိုခွဲခြားရန်အပိုဆောင်းအပြင်ဘက် >
< start="419.757" dur="1.634"> သူတိုးတက်အောင်လုပ်သောသူတို့အားခွဲခြားဆက်ဆံ >
< start="421.392" dur="0.299"> မဟုတ်သောသူတို့၏ထံမှတိုးတက်မှု။ >
< start="421.693" dur="1.967"> မဟုတ်ဘူး။ သို့သော်တစ်ကမ္ဘာလုံးဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ >
< start="423.662" dur="1.132"> သို့သော်တစ်ကမ္ဘာလုံးဖြစ်ခဲ့လျှင်၎င်းတို့တွင်အချက်အလက်များရှိနိုင်သည် >
< start="424.796" dur="1.2"> သူတို့သည်မူလစည်းမျဉ်းများ၌ရှိသောအချက်များရှိနိုင်သည်။ >
< start="426.031" dur="1.934"> မူလစည်းမျဉ်းများထဲသို့။ ဘာကြောင့် POSTGAME ကိုကြည့်ရတာခက်တယ် >
< start="427.999" dur="1.701"> ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ POSTGAME ကဒီထက်ပိုပြီးရေတွက်သင့်တယ် >
< start="429.701" dur="3.002"> ဒီထက်ပိုပြီးရေတွက်သင့်တယ်။ >
< start="432.737" dur="3.97"> မီ။ ငါမျှတဖို့ယနေ့ည။ >
< start="436.708" dur="5.771"> ငါမျှတဖို့ယနေ့ည။ သောအော်ပရေတာမှငါကြားဖူးတယ် >
< start="442.514" dur="0.499"> ငါပြောပြီစစ်ဆင်ရေးမှကြားဖူးတယ် >
< start="443.048" dur="1.133"> ကပြောသည်, ငါတို့ကြားဖူးတယ်အခြားသတင်းများ >
< start="444.215" dur="2.168"> ပြောခဲ့ရင်ငါတို့ကြားဖူးတဲ့အခြားအော်ပရေးရှင်းမှမိုက်ကယ်လ်ဆိုသူပြောခဲ့ဖူးသည် >
< start="446.384" dur="1.935"> အကယ်၍ Michael Bloomberg သည်ပါတီကိုအနိုင်ယူလိုပါကမည်သူပြောသနည်း >
< start="448.353" dur="3.136"> BLOOMBERG သည်ပါတီမဟုတ်ပါ၊ အုပ်ချုပ်ရေးတွင်သူအနိုင်ရရှိလိုသည် >
< start="451.523" dur="1.5"> မဟုတ်ပါ၊ အာမင်ဟုသူသည်ထိုငြင်းခုံသောအဆင့်တွင်ရှိရမည် >
< start="453.025" dur="5.17"> ကူညီရန်အိုင်တီအတွက်နောက်ဆုံးအဖြစ်ရှုမြင်ခံရဖို့သောဆွေးနွေးငြင်းခုံအဆင့်တွင်ဖြစ်ရန် >
< start="458.196" dur="0.633"> သူ့ကိုကူညီဖို့အိုင်တီနောက်ဆုံးပေါ်အဖြစ်ကြည့်ရှုပါ။ >
< start="458.83" dur="1.467"> သူ့ကို။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့အသက်ရှင်နေကြတယ် >
< start="460.298" dur="1.935"> မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်နေသည့်အချိန်တစ်လျှောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်နေကြသည် >
< start="462.267" dur="1.401"> ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီမိုကရေစီစနစ်သည်တိတ်ဆိတ်နေချိန်။ >
< start="463.702" dur="3.135"> ဒီမိုကရက်တစ် TESD နေပါတယ်။ တရားမျှတသော KNOW အတွက်မဲပေးမှုမရှိပါ။ >
< start="466.872" dur="6.338"> တရားမျှတသော KNOW အတွက်မဲပေးမှုမရှိပါ။ ဒီမိုကရက်တစ် Chery FOR AS ။ >
< start="473.245" dur="3.302"> ဒီမိုကရက်တစ် Chery FOR AS ။ ဒါကမှန်တယ်လား >
< start="476.548" dur="1.701"> ဒါကမှန်တယ်လား THE အိုင်တီပြောင်းလဲပစ်ရန်တရားမျှတ IS >
< start="478.25" dur="6.772"> တချို့ကပဲမေးတောလမ်းများ MID အလယ်အလတ်ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်သင့်သည် >
< start="485.023" dur="0.233"> တချို့လူတွေကနည်းနည်းမေးပါလမ်းပြအလယ်ပိုင်းနည်းဥပဒေများ >
< start="485.29" dur="1.968"> Tom ။ >> WE RUSE ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ >
< start="487.259" dur="1.3"> >> WE RUSE ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူတို့သည်အလွန်ပွင့်လင်း AND >